Masikati ano, ndatora maawa mashoma ndikavaka yangu yekutanga mutengi saiti ndichishandisa Elementor. Kana iwe uri muindasitiri yeWordPress, iwe ungangodaro watonzwa iyo buzz nezve Elementor, ivo vangobaya 2 mamirioni kuiswa! Shamwari yangu Andrew, uyo anoshanda Vakabatana veNetGain, akandiudza nezve plugin uye ndatotenga rezinesi risingagumi kuti riite kwese kwese!
WordPress yanga ichinzwa kupisa pane yayo mashoma barbaric kugadzirisa kugona. Ivo vachangobva kuvandudzwa kuna Gutenberg, mupepeti webhokisi-repamhepo uyo anopa kumwe kushanda ... asi haisiyo padyo nedzimwe nzira dzakabhadharwa pamusika. Mukutendeseka kose, ndinovimba vanongotenga rimwe remapulagi epamberi.
Ini ndakakwanisa kuvaka inoteerera inoteerera saiti ine inonamira mamenu, tsoka tsoka, zvakagadziriswa kumhara mapeji, uye fomu fomu kusangana… chaipo kunze kwebhokisi. Izvo zvakatora zvishoma kujaira kuhukuru hweElementor, asi pandakangonzwisisa chete templating, chikamu chikamu, uye zvinhu, ndakakwanisa kudhonza nekudonhedza saiti yese mukati memaminetsi mashoma. Yakandichengetera mazuva enguva uye ini ndaisafanirwa kugadzirisa tambo imwe chete yekodhi kana CSS!
Haisi kazhinji plugin inouya neanoshamisa masimba, asi neElementor, unogona kuseta mamiriro, zvinokonzeresa, uye nemitemo yepamberi yekuti iwe unoda sei popups kutsikisa… zvese zviri nyore interface:
Chipupuriro Carousel Widget - Wedzera bhizinesi rako 'humbowo hwemagariro nekuwedzera inotenderera yeuchapupu carousel yeako anonyanya kutsigira vatengi.
Blog Archive - Kunyange iwe uchikwanisa kugadzira yakanaka blog yekuchengetedza peji neElementor, haugone kunongedza kune iro peji mune ako WordPress marongero! Kana ukadaro, peji rako reElementor richaputsa. Iyi inyaya isinganzwisisike zvekuti zvakanditorera maawa kuti ndizvizive. Pandakangomisa iyo blog peji kune hapana, zvese zvakashanda zvakanaka. Iyo ndiyo bummer, asi nekuti iyo blog peji peji yekugadzwa inoshandiswa mukati mehuwandu hweiyo WordPress template mabasa. Izvo hazvisi kuzodzivisa saiti yako neimwe nzira, ingori nyaya isinganzwisisike.